Umdlalo wegqwirha 🥇 Ngena kwaye uzonwabele kwi-Emulator
Umdlalo wegqwirha. Ngumdlalo omnandi kakhulu, ophuhlisa ingcinga kunye nenkumbulo kunye nezakhono zomhlaba. Yazi imbali yayo, ukwahluka kwayo kunye nendlela yokudlala.
Umdlalo womlingo: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo? 🙂
Ukudlala umdlalo we-Sorcerer kwi-Intanethi mahala, ngokulula landela le miyalelo ngamanyathelo ngamanyathelo :
inyathelo 2 . Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka ucofe nje umdlalo kwaye ungaqala ukukhetha uqwalaselo oluthanda kakhulu. 🙂
Inyathelo 4. Ukuphumelela umdlalo kufuneka utye onke ama-apile ngaphandle kokubetha iindonga okanye wena . Nabani na ofumana amanqaku maninzi ekupheleni komdlalo uya kuphumelela.
Yintoni umdlalo wegqwirha? 🔴
Umlumbi ngumdlalo olula kwaye omnandi onokufikelela kwi-intanethi ngeli phepha.
inyoka-Imidlalo yohlobo yeyona ifunwa kakhulu ngenxa yokulula kwayo, ukudlala kunye nokonwaba kakhulu, kwaye igqwirha yenye yeemidlalo ezihlangabezana nazo zonke ezi mpawu.
Umlumbi uphosa iibhola ezinemibala ngentonga yakhe kwityathanga, elenziwa zezi zijikelezileyo. Umsebenzi womlumbi kukwenza zonke iibhola zinyamalale Phambi kokuba bafike kumngxuma wokugqibela. Ukwenza oku, kuya kufuneka ujoyine iibhola ezintathu okanye nangaphezulu zombala ofanayo ukuze ziqhume kwaye zitshabalale kwityathanga kwaye ufezekise injongo yakho.
Ibali loMthakathi ⚫
Imidlalo efana noMlumbi, ejolise ekutshabalaliseni ityathanga leebhola ngokuphosa amaqamza anombala ukusuka kwindawo emiselweyo, yadalwa ngo-1995.
Abona bantu kujoliswe kubo yayingabantwana. Ibiyi umdlalo wabantwana , kuba indlela yayo yayilula kwaye iibhola ezinemibala zazithandwa ngabo bonke abantwana. kodwa ngexesha elifutshane, kwavela ukuba ayingobantwana kuphela abafuna ukudlala, Abantu abadala nabo bawuthandile lo mdlalo . Oku kumangalisile kuyilo lwabenzi bayo kunye neenguqulelo ezingakumbi zenziwe ngalo mxholo mnye.
Ukuthandwa kwayo kwakubangelwa yinto enokwenzeka ngayo idlalwe ngekhompyutha emva kokuthenga iCartridge, yiyo loo nto yayiqwalaselwa njengomdlalo wepc. Kule mihla, akukho mfuneko yokuthenga ngokwasemzimbeni umdlalo ohamba phambili kakhulu.
yayo uyilo olulula kuthetha ukuba inokudlalwa nakwesiphi na isixhobo, nokuba kungokusebenzisa ii-consoles, ii-mobiles, iipilisi kunye simahla kumaphepha akwi-intanethi.
Ngaphandle kwentshayelelo enkulu, akukho mfuneko yemizobo inzima okanye inzima, lo ngumdlalo olula, ocelomngeni kunye nokonwabisa.
Iindidi zemidlalo yoMkhafuli 🔵
Umdlalo wegqwirha luhlobo yemidlalo yebhola enemibala . Unokwazi kwakhona njengemidlalo yeBubble okanye ibhotile kwaye injongo iyafana, tshabalalisa ikhonkco okanye ulandelelwano lweebhola ezinemibala ngokuphosa amaqamza. Xa udibanisa ezintathu okanye nangaphezulu zombala ofanayo, ziyapheliswa.
Siza kubiza eyona midlalo ibalulekileyo yale fomathi.
Ngenye ye amaqamza adumileyo . Kule meko ayisiyontambo yeebhola, kodwa iibhola ziyaqokelelana kuphahla lwesikrini kwaye kufuneka uzisuse ngaphambi kokuba ziwele emhlabeni.
Olunye udidi lwevidiyo yemidlalo yebhola, nge inkqubo elula kodwa ekhawulezayo oko kukunyanzela ukuba ucinge ngokukhawuleza ukuba awufuni ukuba umatshini akubethe.
Amaqamza ajikeleze ukujikeleza oko kuyingozi kufutshane neziko. Ukuthintela oku kungenzeki, kuya kufuneka udubule amaqamza ukuze ubangenise kwityathanga, wenze amaqela ama-3 okanye nangaphezulu ukuze abe mfutshane. Ukuba ugqibile ngenye yeetyathanga uya kwinqanaba elilandelayo, ngokukhawuleza kwaye kunzima ngakumbi. Ngaba uya kuba nguwe oza koyisa inyoka enemibala?
Kule meko, kukho uhlengahlengiso kwaye inyani kukuba amaqamza amile ngokufana hlukile ziqhamo , oya kuthi ujoyine kumaqela ama-3 okanye nangaphezulu ukubasusa kunye nokucoca isikrini.
Nangona kunjalo, lo mdlalo unezinto ezimbalwa ezenza ukuba ubonakale. Umzekelo, njengokuba ixesha lihamba ngamaqamza esihla , ke ukuba awuphenduli ngokukhawuleza, unokuzifumana ekupheleni komdlalo kwangoko kunokuba ulindele.
Kwaye ukuba usafuna ukuyenza ibenomdla ngakumbi, zama imowudi yokubala umbala, apho imibala itshintshiwe kwaye unokufumana ngokulula, okanye hayi.
Imigaqo yomdlalo wegqwirha 📏
Ukudlala igqwirha kulula kakhulu kwaye kuyonwabisa , yiyo loo nto ngumdlalo ofanelekileyo wabantwana kunye nabantu abadala.
Into ekufuneka siyenzile kukukwenza Sebenzisa abasebenzi bomlingo ukuthumela iibhola kwindawo efanelekileyo kwikhonkco. Injongo yethu kukudala ubuncinci iibhola ezi-3 ezifanayo ukuze ezibhola zinyamalale kwikhonkco kwaye ke zithintele ukuba zingakhuli.
Kuneke u susa zonke iibhola ngaphambi kokuba zifike esiphelweni yendlela kwaye utyibilike emngxunyeni.
Khawuleza kuba ihamba ngokukhawuleza okukhulu! Kukho amanqanaba amathathu ahlukeneyo ukugqibezela umdlalo.
Iingcebiso malunga nomdlalo wegqwirha 🙂
Igqwirha alinayo imithetho enzima kakhulu, kodwa oko akuthethi ukuba ngumdlalo odikayo. Ngapha koko, ukuba awunayo thatha ezi ngcebiso, wena zinokubambeka kumanqanaba kwaye zingabinakho ukuzidlula.
Le yingcebiso yokuqala esikunika yona. Ekuqaleni kubonakala ngathi akukho ngxaki kwaye uza kulidlulisa inqanaba ngokukhawuleza. Kodwa hayi! Xa ufuna ukuyibona, ikhonkco leebhola likhulu kwaye lihamba ngokukhawuleza kangangokuba awunalo ixesha lokuyisusa kwaye konke okufumanayo kukubeka iibhola ezinemibala kwiindawo ezingalunganga.
Ewe, sele siyazi ukuba leyo yinjongo. Kodwa zeziphi iibhola onokuzisusa kuqala?
Nanini na apho unako susa iibhola kwintloko yetyathanga. Khumbula ukuba aba baya kuba ngabokuqala ukufikelela emngxunyeni okhokelela ekungafanelekeni kwethu, kwaye yile nto sifuna ukuyiphepha.
Libala malunga nezinto zamva nje, ubuncinci okoko ikhonkco linkulu.
Yintoni le icinywayo ngokuzenzekelayo? Olunye uhlobo lomlingo ovela kumlingo? Ewe, hayi. Oku kuya kufana nokuba ne- Isicwangciso. Kufuneka siqinisekise ukuba xa ususa umbala kwityathanga, umbala ofanayo uyahambelana kwiiphelo zawo ukuze zisuswe zodwa xa eyokuqala inyamalala.
Ungcolile kakhulu? Ndikunika umzekelo.
Kwikhonkco lethu sinokulandelelana okulandelayo: Mthubi, lilac, lilac, tyheli, tyheli, luhlaza, luhlaza, tyheli ...
Indawo efanelekileyo yokuqalisa ibhola ye-lilac iya kuba phakathi kweelilacs kunye. Ke, sisusa umbala we-lilac kumqolo, akunjalo? Into elandelayo eyakwenzeka kukuba xa umbala omthubi uhlangana, iibhola ezintathu ezimthubi ziyafana ukuba ziyanyamalala.
Ngaba uzithandile iinguqulelo zalo mdlalo? Ngaba lamaqhinga ayakunceda ? Njengoko ubona, kukho iitoni zemidlalo kunye neendlela zokonwabela Umdlalo wegqwirha.
Yintoni na ulinde ukuba uqale ukonwabela!